Nagu saabsan - Shijiazhuang Shencai Factory Factory
Shijiazhuang Shencai Midab Factory aasaasay 2003.Waxaan leenahay weyn Iron Oxide Midabka Production Production (Hebei Chengyu Pigment Co., Ltd), waxa uu ku yaalaa Ningjin Salt Chemical Warshadaha Park, Gobolka Hebei, waa a park kiimikada warshad gobolka, si rasmi ah waa in wax soo saar. Iyadoo leh seddex xariiq oo wax soo saar, awoodda wax soo saar sanadle ah oo dhan 50,000 tan.
soosaarida birta oksaydhka cas, birta oksaydhka ee huruudda ah, birta madow ee birta ah, cagaarka birta birta ah iyo midabbada kale ee taxanaha birta ah, inta badanna loo isticmaalo rinjiyeynta ranjiga, qalabka dhismaha, caagga caagga ah iyo dhejiska midabka biyaha ku saleysan, dhismaha qalabka dusha sare ee qurxinta. Lahaanshaha Kooxda R & D ee Farsamada iyo Sheybaarka Xirfadleyda, adoo adeegsanaya aaladaha baaritaanka ee horumarsan, si loo hubiyo soo saarida qeyb kasta oo badeecado leh tayo deggan. Guddoomiye Gu zhihe wuxuu soo dhaweynayaa dadka ka kooban qeybaha kala duwan ee bulshada si ay u soo booqdaan warshadda si looga wada hadlo loona raadsado horumar guud. Waxaan noqon doonaa qiimaha ugu fiican iyo adeegga ugu tayada fiican ee aan dib ugu noqonno macaamiisha duugga ah iyo kuwa cusub.
Shijiazhuang Shencai pigment waxaa la aasaasay sanadkii 1985
Shirkadda si rasmi ah uga diiwaangashan 2003
Saldhiggii ugu horreeyay ee wax soo saarka huruudda birta ah waxaa la aasaasay 2004, wuxuuna ku yaalay Guzhuang Industrial Park, Shangzhuang Town, Luquan District, Shijiazhuang, oo sanadkii la soo saaro 10000 tan
Sannadkii 2016, iyada oo laga jawaabayo siyaasadda qaran ee ilaalinta deegaanka, saldhig cusub oo soo saarista midabbada oxide birta ayaa laga aasaasay beerta warshadaha kiimikada ee Ningjin .Isla sannadkaas, laanta ka diiwaangashan Hebei Chengyu Pigment Co., Ltd.
In 2017, wax soo saarka sanadlaha ah ee 50000 tan oo ah saldhiga wax soo saarka xabagta birta ah ayaa si rasmi ah loo hawlgeliyey, oo ay ku jiraan saddex khadadka wax soo saarka midabka oxide birta. Khadadka wax soo saarka huruudda ah ee birta birta ah, silsiladda birta ah ee soosaarka cas, xariiqda wax soo saarka madow ee birta ah.
Sanadka 2020, waxaan si firfircoon u casriyeyn doonnaa qalabka ilaalinta deegaanka oo aan u beddeleynaa aqoon isweydaarsiyo wax soo saar.